नेपाली कलाकारका तस्बिर, समाजलाई असर गर्छ कि बढी सोचिन्छ ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsनेपाली कलाकारका तस्बिर, समाजलाई असर गर्छ कि बढी सोचिन्छ ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले भेरिफाइड इन्टाग्राम पेजमा अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीकी आमा रविना देशराज जोशीसँग टिका लगाउँदै गरेको तस्बिर पोष्ट गरिन् । त्यसमध्ये यी दुइको एउटा तस्बिरमा धेरैको ध्यान गयो । जहाँ, टिका लगाइसकेपछि माया साट्दै रविना र प्रियंकाले एक अर्काको ओठमा चुमेका छन् ।
सायद, प्रियंकाले रविनाको गालामा चुम्बन गरेको भए त्यतीधेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया आउने थिएन, जति ओठमा चुम्दा आयो । आखिर, यी दुइले माया नै व्यक्त गरेका थिए, तर ओठमा चुम्दा यति धेरै नकारात्मक कुरा किन ?
आयुष्मान र प्रियंकाको इन्गेजमेन्ट भैसकेका कारणले पनि रविना प्रियंकाका लागि हुन लागेकी सासु आमा हुन् । बिहे नगर्दै सासु आमा भन्नु उपयुक्त नहोला ।
हाम्रो समाजमा सासुसँग भेट्दा बुहारीले टाउको निहुराउँदै आर्शिवाद थाप्ने चलन छ । अब, त्यो चलन
अझै छाड्न नसकेको समाजमा प्रियंका र रविनाको आधुनिक माया पचिहाल्न गाह्रो छ । सेलिव्रेटीले सामान्य रुपमा सोचेपनि त्यसले प्रभाव गहकिलै पारिदिन्छ ।प्रियंका र रविनाको विकिनीमा नुहाउँदै गरेको तस्बिरले पनि गालीको बर्षा नै पाएको थियो । त्यो तस्बिरले प्रियंकाको सेलिव्रेटी उचाई घटाइ दिएको थियो ।
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले रहरकै लागि भएपनि बक्षस्थलको तल ट्याटु खोपिन् । तस्बिर लिक भयो र भाइरल भयो । साम्राज्ञीलाई गाली मात्र आयो ।गाली नै गाली खाएपछि साम्राज्ञीले यसलाई व्यक्तिगत कुरा भनिन् । साम्राज्ञीले आफ्नो जुन अंगमा पनि तस्बिर खोप्न पाउने अधिकार राख्छिन् । यो उनको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा भयो । तर, सेलिव्रेटी भैसकेपछि कुरा फरक हुने रहेछ । साम्राज्ञी बाहेक अन्य कुनै सामान्य यूवतीले यसरी ट्याटु खोपेको भए त्यसले यति चर्चा पाउने थियो होला र ?
कलाकारहरु नसोचेर या सामाजिक संजाललाई व्यक्तिगत रहरमा परिणत गरिदिन्छन् । तर, त्यसले पाउने मिडिया कभरेज र समाजमा पर्ने असरको बारेमा सोच्दैनन् । जसले पछि यति धेरै गाली खान्छ कि, उनीहरुको बन्दै गरेको उचाई पनि घटाइदिन्छ ।
हुनत, कतिपय अवस्थामा सेलिव्रेटीको बारेमा समाजले बढी नै नकारात्मक टिप्पणी गर्छ । सेलिव्रेटीको पनि व्यक्तिगत जीवन हुन्छ भन्ने विर्सन्छ । तर, सामाजिक व्यक्ति भैसकेपछि त्यसभित्र पर्ने मुल्य र मान्यतालाई पनि संझन आवश्यक छ ।
नव जोडी प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको पहिलो दशैं टिका ( फोटो फिचर )
raveena deshraj joshi
निर्देशक आकाश अधिकारी र नायक आर्यन अधिकारीको दशैँ टिका ( फोटो फिचर )
November 9, 2017 Baikuntha Parajuli Entertainment, Kollywood 0
काठमाण्डौ : हाल प्रदर्शनरत चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’को सिक्वेल निर्माण हुने भएको छ। बिहिबार राजधानीमा आयोजित ‘फाटेको जुत्ताको’ सफलता सेलिब्रेसन कार्यक्रममा उक्त कुराको जानकारी गराइएको हो। ‘फाटेको जुत्ता २’ मा पनि निकेश खड्का कै निर्देशन रहने […]
डेब्यू फिल्ममै चकलेटी हिरोको क्रेज
September 24, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – गतबर्ष सिनेमा ए मेरो हजुर २ रिलिज हुँदा चकलेटी हिरो सलिनमान बनियाँले क्रेज बनाए । यो सिनेमाले हलमा दर्शक बटुल्दा सलिनका लागि तछाडमछाड गर्ने यूवतीहरुको संख्या बढ्यो । सलिनको कपाल स्टाइल, कपडाको डिजाइन […]